Mpampianatra any Androy sy Anosy Avoahay ny tambin-karamanay
Mampiaka-peo ny mpampianatra mpanampy any amin’ny Faritra Anosy sy Androy. Mametra-panontaniana amin’ny filoha sy ny Minisiteran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo.
Hita fa misy vola zaraina ho an'ireo sahirana aty amin'ny faritra Anosy, Androy fa ny zavatra mampalahelo anay dia izahay miasa indray no tsy omena ny tambIn-karamanay nanomboka ny volana martsa 2019 no tsy azonay hatramin’izao, hoy izy ireo. Efa 12 volana tsy nahazo tambin-karama ny “suppléant” aty amin’ny faritra Anosy. Noho izany dia mametra-panotaniana izahay aty hoe : ny minisitera ve no tsy manome ny volanay sa efa tao amin’ny DRENTP Anosy ny volanay fa nolanian'izy ireo? Hoy ireo mpampianatra. Mijaly izahay, hoy ireo mpampianatra ireo.